Izimbuzi zoMdabu zaseNingizimu Afrika
Izizwe zokufuduka ezivela enkabeni ye-Afrika zathuthela eningizimu ukuze zibalekele izifo zezimpukane futhi zilethe ukuxuba kwezimbuzi ezinamadlebe amade namfushane.
Lezi zimbuzi zingaphila cishezisidla zonke izinhlobo yesitshalo futhi zasinda futhi zabeletha ezimweni ezinzima kakhulu.
Bahlala ezweni elisehlathini lase-Eastern Cape, ukufuywa kwezimbuzi kwathuthuka. Lapha abalimi bendawo bazuza izimbuzi ezinemikhono ezinomvalo ezincane ezinesihluthulelo "ezivula" izitshalo ezinameva benzela isimbuzi ze-Angora nezinkomoi.
Izimbuzi ezimhlophe zazikhethwa ngoba zazilula ukubona futhi ngokushesha zizalana ngezimbuzi zamaduna ezinombala ezinamandla okwabangele imfuyo yokuqala yeBoer epulazini laseKaalplaas ngaseCradock.
Ukulima ngokweqile emagqumeni wemvelo kunokwenzeka ezindaweni eziningi eNingizimu Afrika futhi kuvame ukuwenza umqondo wezomnotho ukuhlanganisa izinhlobo ezingaphezu kweyodwa zezilwane ezifuywayo ezifana nokufaka izimbuzi emiphumeleni yezilwane epulazini. Izimbuzi zinamandla amakhulu okuthuthukiswa; lokhu kuhlanganisa ukuthengiswa kwemfuyo yendabuko kanye nemikhiqizo ehlobene nayo efana nesikhumba.
Uhlobo lwe-Nguni lube luningi kakhulu kunezinye izinhlobo ezihlukile zezimbuzi zendabuko futhi kuvame ukutholakala ezindaweni eziphakeme zezimvula zaseNingizimu Afrika.
Izimbuzi zihlangene futhi zifakwe ezincane eziphakathi, nezinsikazi ezincane kunamadoda. Iphrofayli ebusweni ibuye ibe incane, nakuba abanye besilisa banomlomo omncane waseRoma. Amacilongo nezintshevu zikhona kuzo zobulili zombili.
Imbuzi yihlobo oluhlukahlukene, olunemibala ehlukahlukene kanye namaphethini ejazi elifushane, elimhlophe. Ezinye izimbuzi zingakhula uboya lokudayisa ebusika.
Imbuzi Yamaxhosa yase-Eastern Cape
Imbuzi yase Eastern cape iyimbuzi yesilinganiso esiphakathi kuya kwesikhulu.Inobuso obude namadlebe ajikelezayo. Insingizi ikhona kuzo zobulili zombili, kodwa izintshevu zikhona emadodeni futhi ngokuvamile azikho kwabesifazane. Izintshevu zamadoda zikhulu. Imibala ehlukahlukene efana nomhlophe noomnyama nemibala emibili noma eminye ehlukene),. Iziningi zezimbuzi zinejazi elifushane, elibomvu, futhi lizimisele ukukhulisa uboya lokudayisa ebusika.
Imbuzi yase-Northern Cape Evakazile
Imbuzi evakazile yavela eNyakatho Kapa eyomile futhi yathathwa abalimi bephayona eNamibia lapho abalimi abathile baseNamibia bagcina behlanzekile.Evakazile inesilinganiso esiphakathi kuya kwesikhulu.Inamadlebe amakhulu futhi bobabili besilisa nabesifazane banezimpondoIzintshevu zikhona emadodeni, nakwabesifazane abathile. Izintshevu zesilisa zivame ukuba zinkulu.
Ikhanda nemilenze ivakazile. Umzimba wayo wonke umhlophe, ogcwele amabala abomvu noma amnyama ngaphezulu, ngemuva, nangaphambi kwentamo. Iziningi zezimbuzi zikhula uboya lokudayisa ebusika.
Imbuzi ye-Kunene (Kaokoland)
Njengoba ihambisana nesimo sezulu esibucayi esifundeni saseKunene eNamibia, le mbuzi iyizinhlobo ezinkulu ezizimele ezinomlenze omncane ovame ukutholakala nabantu baseHimba abangahlali endaweni eyodwa. Izimbuzi zihamba kahle futhi zingahamba amabanga amade ukuthola amanzi. Lezi zimbuzi zinobuso obuncane nezindlebe ezinkulu nezimpondo ezinkulu ezikhona ebulilini bonke. I-Kaokoland imbuzi enemibala ehlukahlukene nezinwele ezinde.